Mpanjifa IRC 5 ambony ho an'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Toa lainga izany, na eo aza ny fisehoan-javatra ateraky ny tambajotra sosialy toa ny Facebook na Twitter ny teknolojia taloha tsara dia mitohy manankery ary ny laza. Izany no tranga IRC (Chat Relay Chat), rafitra iray mamela ny fanaovana kaonferansa maro-mpampiasa izay ahafahana manao resaka mavitrika amin'ny vondrona amin'ny fomba tsotra sy mahomby. Tsy mitovy amin'ny instant messaging izay mpampiasa dia tsy tokony hanaiky ny hametraka fifandraisana mialoha, amin'ny fomba ahafahan'ireo mpampiasa rehetra ao anaty fantsona mifandray amin'izy samy izy, na dia tsy nanana fifandraisana teo aloha aza izy ireo
Ny IRC protocol dia misy ifandraisany manokana amin'ny tontolon'ny Linux- Hetsika sy fivoriana marobe no tanterahina saika, ary ity teknolojia ity dia manamora ny idirana sy fampandehanana ireo fivoriana ireo. Ireo mpanjifa afaka mifandray amin'ireo kaonferansa ireo dia be dia be, na dia misy aza ireo miavaka.
Ary ny fanasongadinana ireo mpanjifan'ny IRC dia izay tena vitany Linux.com, izay nandinihin'izy ireo ny tombony sy ny fatiantoka Mpanjifa IRC 5 lehibe mamela ny mpampiasa hifandray amin'ireo serivisy ireo.
Ireto no mpandray anjara fototra:
Na dia mety tsy fantatry ny sasany aza izany, Pidgin dia tsy mpanjifa fandefasana hafatra eo noho eo fotsiny, mamela anao hiasa amin'ny mpanjifa IRC ihany koa izy io. Midika izany fa ny mpampiasa dia tsy vitan'ny hoe mifampiresaka amin'ny namany sy ny olom-pantany amin'ny tambajotran-tserasera IM ihany fa afaka miditra amin'ny efitranon'ny IRC hiresahana karazana lohahevitra rehetra.
Este Mpanjifa manokana IRC ho an'ny KDE Izy io dia manana interface interface mahazatra zaraina ho takelaka ho an'ny efitrano tsirairay, ary azo atao ny manamboatra fampandrenesana, ao anatin'izany ny fampandrenesana amin'ny Screen Display (OSD) hanairana antsika rehefa tsy eo aloha ny fikandrana IRC- ary mamela antsika hamorona tsoratadidy amin'ireo fantsontsika na efitrano ankafizinao, ary fanampiana hafa hanaovana fivoriana IRC araka izay azo atao.
Angamba iray amin'ny tranainy indrindra, saingy tsy natao ambanin-javatra izany. Xchat dia mpanjifa IRC miaraka amina interface tsara voavaha tsara ary ahazoana tombony ihany koa lafin-javatra iray hafa tena mahaliana: script sy plugins, izay manao ny fiasa voalohany ho mpanararaotra kely fotsiny izay azontsika tratrarina amin'ireo fanampiana ireo. Ohatra, ny script izay manampy feed RSS amin'ny resaka, na ny hafa mamela anao hilalao échec amin'ny alàlan'ny IRC na hifehy ny MP3 MPXNUMX.
Raha mpampiasa Firefox ianao ary aleonao mitazona ny ankamaroan'ny asa ampidirina ao anaty tranokala, azonao atao ny mankafy ity plugin ity ho an'ny mpitety Mozilla izay mamela anao mifandray amin'ny IRC mivantana avy amin'ny mpitety. Araka ny voalaza tao amin'ny lahatsoratra tany am-boalohany, ny fampidirana ao anaty browser dia tsy mampihena ny fahalianan'ny ChatZilla, satria mpanjifa amin'ny zavatra rehetra ilainao hankafizanao izany traikefa IRC izany, ary misy plugins fanampiny ho an'ny ChatZilla, na dia ao aza ity ny fizarana dia tsy mahatratra ny habetsany na ny kalitaon'ny XChat na i Irssi, ilay mpiaro antsika manaraka.
Ny veteranina be indrindra sy ireo izay miasa miaraka amin'ny command console dia hahafantatra izany Irssi, mpanjifa mifototra amin'ny tambajotran'ny baiko. Ao amin'ny Linux.com dia asehon'izy ireo fa tena mahaliana indrindra ny mampiasa Irssi miaraka amin'ilay fitaovana Efijery GNU hahatratra tandem lehibe -fampianarana feno eto- rehefa mifandray amin'ny session IRC avy amin'ny terminal. Ho fanampin'izany Irssi dia manana katalaogin'ny plugins, script ary add-on izay manampy anao amin'ny fanararaotana indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Mpanjifa IRC 5 ambony ho an'ny Linux
chupy35 dia hoy izy:
tsy hita irssi sy quassel
fa i irssi no mandray azy ...
Mamaly an'i chupy35
Marina ... efa nampidiriko tao amin'ny lisitry ny Programs izy ireo. Jereo: https://blog.desdelinux.net/programas/
ara11 dia hoy izy:
Eto ianao manana bebe kokoa mpanjifa ho an'ny IRC
Mamaly an'i ara11
Reygun30012 dia hoy izy:
Te hanana bebe kokoa aho fa ny IRC dia mivoatra amin'ny Interface zavatra mitovy kokoa amin'ny MSN ary ambonin'izany rehetra izany dia tiako ny hanana ny safidy rehetra amin'ny fomba mora azo i msn satria na dia tiako aza ny baiko dia tsy dia mamokatra loatra ny fampiasana azy ireo.
Valiny tamin'i Reygun30012
Rodri Brv dia hoy izy:
Irssi + Tmux… Fangaro mitambatra
Valiny tamin'i Rodri Brv
Ireo zava-baovao 5 an'i Lucid Lynx